नेपालमै खुʼल्यो- सँसार चʼकित पार्ने रेष्टुरेण्ट ! कस्तो अचम्म ! पानी मुनि बसेर खाʼना खाने (भिडिʼयो हेर्नुस) « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाण्डौं- बाहिरी मोहोडामै परम्परागत घर र साना गल्ली देखिन्छन्। गल्लीमा एउटा फल्चा (पाटी) छ, जहाँ जेष्ठ नागरिकहरू भलाकुसारी गरिरहेका भेटिन्छन्। पर डाँडामा स्तुप देखिन्छ। यो काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत संरचना झल्काउने कुनै ठाउँ होइन, ललितपुर कुमारीपाटीको रेस्टुरेन्ट हो।
‘वान डे थ्रिडी आर्ट रेस्टुरेन्ट’ का यी दृश्यका आडैमा बसेर फोटो खिच्नुहोस्, तपाईंलाई त्यहीँ पुगेजस्तो लाग्नेछ। अचेलका होटल, रेस्टुरेन्टमा कलात्मक चित्र बनाएर ग्राहक आकर्षित गर्नु सामान्य भइसक्यो। ‘वान डे थ्रिडी आर्ट रेस्टुरेन्ट’ का भित्तेचित्रको विशेषता भने फरक छ। झट्ट हेर्दा थाहा नपाऔंला, तर ती कलासँग घुलमिल हुनुहोस्, फोटो खिच्नुहोस्, विशेषता पत्ता लागिहाल्छ।
यी ‘थ्रिडी’ कला हुन्, जुन रेस्टुरेन्टको नामैले झल्काउँछ। ‘हामीले यहाँका भित्तामा जे काम गरेका छौं, फोटो खिच्दा त्यो ठाउँ पुगेर खिचेजस्तो भ्रम देखाउनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ रेस्टुरेन्टका संस्थापक सुन्दर विष्टले भने।
तीनतले रेस्टुरेन्टका सबै कोठामा विशेष ‘थिम’ का थ्रिडी चित्र भेटिन्छन्। सुन्दर हामीलाई रेस्टुरेन्ट घुमाउन अघि सरे। घर, साना गल्ली र फल्चा कटेर अलि भित्र पस्दा बरन्डामा थ्रिडी पुल कुँदिएको छ। छेउमा खोला, पहाड अनि झर्ना । यसैबिच कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता शिशिर भण्डारी वान डे थ्रिडी रेष्टुरेण्टमा पुगेका छन् ।
शनिबार राति आएको पहि’रोले पु’रिएर बे’पत्ता भएका बालकको श’व पाँच दिनपछि भेटियो !!!!